အောင်ဘယ်လိုကြောင်းကို: VKONTAKTE အတွက်အုပ်စုတိုက်ရိုက်ဖုံး - သတင်း - 2019
လူမှုကွန်ယက် "VKontakte" လစဉ်လတိုင်းအဘယ်သူမျှမပြိုင်ဖက်ရှိသည်သောယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်တီထွင်မှုနှင့်ချစ်ပ်, အံ့သြသွားတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးခြွင်းချက်နှင့်လက်ရှိဒီဇင်ဘာလမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အုပျစုမြား "VKontakte" အတွက်တိုက်ရိုက်အဖုံး - ကုလားကာနောက်ကွယ် obzavolsya, Runet ၏အဓိကအရင်းအမြစ်များ၏တဦးတည်းထက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးသောစိတ်ဝင်စားဖို့။
တိုက်ရိုက်အဖုံးကို အသုံးပြု. ၏မျိုးကွဲ
ခြေလှမ်းလမ်းညွှန်ခြင်းဖြင့်ခြေလှမ်း: VKontakte ၏တိုက်ရိုက်အဖုံးအောင်လုပ်နည်း
တိုက်ရိုက်အဖုံး - ကသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ရုံလူကြိုက်များဝေါလ်ပေပါထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်ဘဝဖို့ဂီတဗီဒီယိုအပေါ်ချမှတ်ထားသည့်စရိတ်မှာသူမ၏ရုပ်ရှင်နှင့်အသံအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်ကျေးဇူးတင်စကားလာပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါတယ် - ယခုအုပ်စုများနှင့် SMM အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ပိုင်ရှင်များအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းသောအားသာချက်များမရှိကြပေ။ ထို့အပြင်သူတို့လုပ်နိုင်သည်မှာ:
သင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုပြောပြရန်သာစက္ကန့်အနည်းငယ် - ၎င်း၏သမိုင်းနှင့်ပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာ;
အဖုံးအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးဖန်တီးသောအခါထိရောက်စွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအစားထိုးငါးဓါတ်ပုံများနှင့်အနည်းငယ်ဗီဒီယိုများမှတက်ကိုအသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုသူများသည်စကားလုံးများကိုမရှိဘဲပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာအဖြစ်စနစ်တကျရွေးချယ်ထားသည့်အရေအတွက်က, အအုပ်စုများတစ်ခုအလွန်အမင်းရှည်လျားမကြာခဏမိုးသည်းထန်စွာစာသားကိုဖော်ပြချက်နေရာတွင်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
သာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအသိုင်းအဝိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုစဉ်တိုက်ရိုက်အဖုံးမရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် 2019 ခုနှစ်အစောပိုင်း၌, လူမှုကွန်ယက်၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်အစီရင်ခံအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသမျှတို့ကိုအခြားအုပ်စုများ၏ပိုင်ရှင်များကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်နည်းပညာအသစ်ယခုမှသာစမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက်ဒီဇိုင်းအနုပညာလက်ရာများကိုဖြစ်ပါတယ်။ desktops နဲ့သငျသညျမတတျနိုငျသည်အထိအဖုံးအမျိုးအစားအသစ်တစ်မျိုးကြည့်ဖို့လက်ပ်တော့တွင်။ ဟုတ်မဟုတ်အောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံအပေါ်, သူတို့ပျံ့နှံ့မည်, ကုမ္ပဏီသတင်းပို့ခဲ့ပါဘူး။
စကားမစပ်အဆိုပါ gadget ကတိုက်ရိုက်အဖုံး၏မျက်နှာပြင်ကြောင့်ဗီဒီယိုများ၏ပါဝင်မှသာထွက်ရပ်, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့်။ ဒါဟာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်လေးဆပို "ပုံမှန်" ဝေါလ်ပေပါပါပဲ။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူမိတ်ဆက်ခြင်းကိုပြောပါတယ်သို့မဟုတ်သီဆိုဘာနားမထောင်ဖို့, တစ်ခုလုံးကိုမျက်နှာပြင်၏အရွယ်အစားနှင့်အထူးသဖြင့်သံကန့်, မိမိအဖုံးကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကြီးမားသောအရွယ်အစားအဖုံးများဟာပြီးသားအကျွမ်းတဝင်ဒီဇိုင်း (နှင့်အစားထိုးမဟုတ်) နှင့်အတူပဋိပက္ခ၌မနေသောခေါင်းစဉ်: ကိုယ်စားပြုပုံ, အုပ်စုအမည်များ; တရားဝင်အဖုံး၏ဗားရှင်းအသစ်သို့ထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်းရပ်ရွာအခြေအနေနှင့်အရေးယူခလုတ်။
ယနေ့အထိတစ်ဦးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖုံး - ကလူမှုကွန်ရက်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့စာမျက်နှာ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကအကဲဖြတ်နိုင်သည့်, သီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ဖော်ခြင်း, အစာကျွေးခြင်း၏ဗားရှင်းအသစ်စမ်းသပ်ပြီးသောသူတို့၏အမျိုးအဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရွေးချယ်မှု။ ရှေ့ဆောင်များထဲတွင်ကမ္ဘာကြီးအမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည်:
စတိုးဆိုင်များ Nike ကဘောလုံးရုရှားက (သူတို့ဆိုင်များတွင်ရောင်းချလျက်ရှိသောအားကစားဖိနပ်၏ဗီဒီယိုကြော်ငြာအတွက်ကောင်းစွာ fit);
PlayStation အဖွဲ့ရုရှားက (စိတ်ဝင်တစားလေ့လာအသုံးပြုသူများအသေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်အထင်ကြီးစရာကိုဗီဒီယို - ဇာတ်လမ်းတွဲကျမ်းပိုဒ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်း);
(roller လေယာဉ်ကိုချွတ်ယူပြီးနှင့်အတူမိတ်ဆက်ခြင်းကိုဖက်ရှင်များတွင်အသုံးပြု) လေကြောင်းလိုင်း S7 လေကြောင်းလိုင်း;
ရော့ခ်တီးဝိုင်းနှစ်ဆယ့်တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူး (ထိုဖျော်ဖြေပွဲစွမ်းဆောင်ရည်ယခုအချိန်တွင်၏တိုက်ရိုက်အဖုံးပြုပါ) ။
သို့ရာတွင်ထိုသို့မဟုတ်ဘဲကဒီမှာထားရှိကြော်ငြာများ၏မျက်နှာဖုံးနှင့်ထိရောက်မှု၏အသိအမြင်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်အရာကိုနမူနာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂီတတပ်သားဗီဒီယိုများဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပကြပါပြီပြအပြင်, လာမည့်ဖျော်ဖြေပွဲကြော်ငြာဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ နှင့်အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်အထူးလျှော့စျေးအကြောင်းကိုဖောက်သည်အသိပေးအသစ် collection များကိုများ၏တင်ဆက်မှုများအတွက် tool ကိုဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ရပ်ရွာကဖေးများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင်ဦးဆောင်လမ်းပြသောသူတို့အားနည်းပညာဖြစ်ပါသည်: အခုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အဖုံးအရာ၌ဝါကြွားဖို့ထူးခြားသောဟင်းလျာများနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောအတွင်းပိုင်းသို့တငျပွနိုငျ။
ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်. နှင့်တကွ, image ကိုဒေါင်လိုက်ဖြစ်ရမည်။ 1920 pixels - သူတို့ရဲ့ width ကို 1080 နှင့်အမြင့်သည်။ သို့သော်ဒီဇိုင်း developer များအရွယ်အစားအခြားရွေးချယ်စရာကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမဲ့သူတို့916 တစ်အချိုးရှိကြ၏နိုင်အောင်။
အရည်အသွေးအရလဒ်များကို poluchichit ရန်, အဖုံးဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပုံစံအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်
MP4 ကို format နဲ့;
တစ်ဦးဒေါင်လိုက်မှုနှုန်း - တစ်စက္ကန် 15-60 frames များကို;
ကြာချိန် - မပိုတစ်နှစ်ခွဲထက်တစ်မိနစ်;
အရွယ်အစား - 30 MB ပါမှတက်။
169တစ်အချိုးအတွက်တင်၏အဖုံးအဘို့အ image
တိုက်ရိုက်အဖုံး Loading အသိုင်းအဝိုင်း setting တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အုပ်စုတစ်စု setting များကိုမှတဆင့်တတ်နိုင်သမျှဖုံး Upload လုပ်ပါ
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, (iOS နဲ့အားလုံး Android အတွက်) ကိုသစ်ကိုဒီဇိုင်းထူထောင်ပါကအဟောင်းအငြိမ်အဖုံး (က web- နှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိမည်) စွန့်လွှတ်မှမလိုအပ်ပါဘူး။
တိုက်ရိုက်အဖုံးအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်ဆိုသောအခါထိုအချိန်ကာလ၏ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, နောက်နှစ်၏အစအဦး၌အလက်ရှိတွင်မကြာခဏပြောင်းလဲနေသောအဖုံးကိုအစားထိုးတံ့သော, အဖုံးများ၏ဒြပ်ထု installation ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ တဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းရန်စတင်နေချိန်တွင်မကြာသေးမီလူကြိုက်များ။